खेल्दा होस गर शरीरमा सिसा पस्ला है
गोपीकृष्ण ढुंगाना आइतवार, कात्तिक १९, २०७४ 2512 पटक पढिएको
भाइबहिनी हो, तिमीहरू स्वास्थ्यप्रति कत्तिको सजग छौ ? ‘स्वास्थ्य नै धन हो' भनेर तिमीहरूले पढेकै छौ । त्यसैले सजग छैनौं भने आजैका दिनदेखि सजग होऊ । जब रोगले आक्रमण गर्न थाल्छन्, तबमात्र तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ, स्वास्थ्य हुनु किन धन हो भनेर । पक्कै पनि तिमीहरू कहिलेकाहीँ बिरामी त परेकै होलाऊ । रोग लाग्दाको पीडा त पक्कै बुझेकै छौ होला । रोग लागेर औषधिमूलो गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु जाति हो । यो वाक्यलाई गहिरिएर मनन् गर अनि आजैदेखि खाँदा होस् या खेल्दा, धेरै कुरामा ध्यान देऊ है ।
लिडयुक्त पेन्ट उन्मूलनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा यही कात्तिक ५ देखि ११ गतेसम्म लिड (सिसा) को विषबाट बचाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को संयुक्त तत‍्वावधानमा विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सचेतना सप्ताह मनाउने गरिन्छ । केही वर्षयता नेपालमा पनि यो सप्ताह मनाइने गरिएको छ ।
तिमीहरूलाई थाहा छ, यो वर्षको नारा के हो ? ‘लिडमुक्त बालबालिका, स्वस्थ्य भविष्यका लागि (लिड फ्रि किड्स फर अ हेल्दी फ्युचर) भन्ने मुख्य सन्देशसहित विश्वव्यापी रूपमा मनाइयो । नेपालमा पनि यो साता बालबालिकाको स्वास्थ्य एवं भविष्य जोगाउन लिडयुक्त पेन्ट उन्मूलन र प्रतिबन्धका लागि सरकारी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
पछिल्ला वर्ष अझ राजधानी र सहरमा बस्ने हामीले स्वास्थ्य जोगाउन सक्नु अर्थात् निरोगी भएर बाँच्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । तिमीहरूले पनि पाठ्यक्रमका अलावा यस्ता गम्भीर विषयलाई ध्यान दिएर बुझ्नु र जीवनमा अपनाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिड (सिसा) लाई विश्वव्यापी रूपमा जनस्वास्थ्यलाई असर पुर्‍याउने प्रमुख १० रसायनमध्ये एक प्रमुख घातक रसायन हो भनेको छ ।
चिकित्सकका अनुसार, मानव शरीरमा लिडको कुनै सुरक्षित मात्रा हुँदैन । लिडले मानिसको अझ खासगरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकासमा असर पुर्‍याउँछ । विश्व परिवेशको यो तथ्यांक पढ त, ‘लिडको सम्पर्कबाट हुने दीर्घकालीन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूले बर्सेनि सरदर आठ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।'
लिडले मानिसलाई बौद्धिक अशक्त बनाउँछ । मानसिक रूपमा विविध समस्या भोग्न बाध्य तुल्याउँछ अनि शारीरिक रूपमा काम फटाफट गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । विश्वमा जति पनि बौद्धिक अशक्त छन् तीमध्ये ९.३ प्रतिशत मानिस लिडका कारणबाट भएको तथ्य फेला परेको छ । यस्तै मुटुसम्बन्धी रोग ४.० प्रतिशत, पक्षघात ६.६ प्रतिशत मानिसलाई प्रभावित तुल्याएको छ ।
नेपालमा लिडको सम्पर्कबाट पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने असरबाट बर्सेनि एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भइरहेको अनुमान गरिएको छ । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्र र लिडर्स नेपालले नेपालमा प्रयोग हुने १८ पेन्ट्स उद्योगका ३७ रङ अध्ययन गर्दा इन्डिगो, बर्गर, यति, रिलाइन्स, सालिमार, सालिमार इन्डिया, कन्साई नेपाल पेन्ट, इन्डियन पेन्टस र अमेरिकन पेन्टस् द एन्डर्सन आठवटा रङले मापदण्ड नाघेको फेला पारेको छ । यसैगरी एसियन र पशुपति पेन्टस् र नेपाल पेन्ट उद्योगका रङमा पनि लिड बढी भएको पाइएको छ ।
घर र विद्यालयको बस (पहेँलो)मा समेत यस्ता रङ लगाइने हुँदा छुने र खेलाउने गर्न हुँदैन । विद्यालयमा खेल्दा बिछ्याइने हरियो दूबोजस्तो कार्पेटमा लिड बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै तिमीहरू बस्ने डेस्क, बेञ्च र कुर्सी आदिबाट पनि शरीरमा लिड प्रवेश गर्छ । केन्द्रको अध्ययनअनुसार, विद्यालयभित्रको धुलो, खेलौनाहरू आदिमा लिड पाइन्छ । आजैदेखि सचेत होऊ र स्वास्थ्य जोगाऊ है ।
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 59
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 189
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1271
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8806
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14392